सामूहिक हत्या पछि मादीवासी अझै त्रसित
१७१७ पटक पढिएको
धरान : सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका १ उमलिङको खोलागाउँमा एकै परिवारको ६ जनाको सामूहिक हत्या पछि त्रसित बनेका मादीवासीको त्रास अझै हराएको छैन ।
एक साता अघि भदौ २१ गते सोमबार बिहान तेजबहादुर कार्की सहित उनको अन्य ५ जना परिवारको सामूहिक हत्या भएको खबरले सबैको ध्यान तान्यो । एकै घर परिवारका ६ जनाको सामूहिक हत्याले मादीवासीमा ठुलो त्रास पैदा गरायो ।
एकै घरका यत्ति धेरै जनाको घर वरिपरि छरपस्ट छरिएका शवहरूले गर्दा खोलागाउका मात्रै होइन मादीवासी सबै अचम्मित भए । यसरी हत्या गर्नुको कारण के हो ? किन हत्या भयो ? भन्ने जस्तो कौतुहलता जाग्न स्वाभाविक थियो ।
सङ्खुवासभाको विकट गाउँ मध्येको एउटा गाउँ मादीको खोलागाउमा घटेको यो घटनाले धेरैको ध्यान तान्यो । गत सोमबार बिहान यत्रतत्र छरिएका शवहरू देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि चौकी बजारबाट ५ जनाको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो ।
परिवार नै सखाप हुने गरी घटाइएको यो हत्याकाण्डले मादीवासीको होस हवास नै उड्यो । वंश नै सिध्याउने यो हत्याकाण्डले ५ दिन सम्म अपराधी पत्ता लगाउन नसक्दा स्थानीयवासी झनै त्रसित बने । तालिमप्राप्त कुकुरले समेत अपराधी ठम्याउन नसकेको त्यो घटनाको ५ दिन पछि भने प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाएरै छोड्यो ।
हत्यारा थिए मृतक तेजबहादुर कार्कीकै आफ्नै बडाबाका नाति १३ दिने दाजुभाइ भित्रकै भतिज २५ वर्षीय लोकबहादुर कार्की ।
एकै परिवारको ६ जनाको सामूहिक हत्या पछि घर वरिपरि छरिएका शवहरू देखेका मादीवासीको आँखामा अपराधी पक्रिए पनि त्यही दृश्य झलझली आउने गरेको बताउँछन् ।
मादी नगरपालिकाका मेयर विदुर लिङ्थेपलाई समेत त्यो घटनाको झझल्को आउने गरेको बताउँछन् । प्रहरी अनुसन्धानमा सँगै रहेका मेयर लिङ्थेपले भने–प्रहरीको गम्भीर अनुसन्धानले नतिजा निकाले पनि अझै मादीवासीमा डर त्रास कायमै छ ।
एकै जनाले यत्रो हत्या गरेपछि मादीवासीको त्रासलाई कम गराउन अहिले पनि घटनास्थलमा प्रहरीको एउटा टुकडी रहेको छ र पनि बीभत्स हत्याको झझल्को हट्न नसकेको स्थानीय सुमन कार्की बताउँछन् ।
भदौ २१ गते सोमबार बिहान उनलाई सामूहिक हत्याको कारेमा फोनमै आफन्तले जानकारी दिए । उनले पनि पहिले त विश्वासनै गर्न सकेनन् तर घटनास्थलमा आइपुग्दा नसोचेको दृश्य देखेको बताउने कार्कीले सामूहिक दाहसंस्कार पछि मादीको खोलागाउ आफ्नो गाउँ पुगेका उनले सामूहिक हत्याको त्यो दृश्य दिमागमा ताजै नाचिरहेको बताउँछन् ।
सामूहिक बीभत्स हत्या पछि मादीवासीमा त्रास कायमै रहेकोले अहिले पनि गाउँघरका छिमेक भेला भएर सुत्ने गरेको मादी १ का वडाध्यक्ष खेम कटुवाल बताउँछन् ।
अझ अपराधी पाँच पाँच दिन सम्म अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीसँगै थिए । एकै जनाले यत्तिका धेरैको एक्लै हत्या गरे र ? भन्ने प्रश्न मादीवासीमा जिवितैछ । तर प्रहरी अनुसन्धानले सामूहिक हत्याको मुख्य अभियुक्त नै तिनै लोकबहादुर कार्की साबित भए ।
अभियुक्त अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् र पनि त्रास हराएको छैन । जब सम्म मादीवासीमा त्रास हट्दैन तब सम्म मादीमा प्रहरी रहने सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका एसपी भीमबहादुर दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन् – फराकिलो घेराबाट अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले अन्तिममा केन्द्रबिन्दुमा अपराधी परेरै छाड्यो ।
लोकबहादुरलाई बडाउ तेजबहादुर कार्कीले कहिले कही सम्झाइबुझाई गर्दा त्यही कुरालाई रिसइबी लिएर उनले सामूहिक हत्या सम्म गर्न भ्याएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
उनले ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्की, ८४ वर्षीय आमा पार्वता कार्की, ५८ वर्षीय श्रीमती मनमाया कार्की, ३२ वर्षीय बुहारी रञ्जना कार्की, १० वर्षीय नाति दीपक कार्की र ५ वर्षीय नातिनी गोमा कार्कीको बीभत्स हत्या गरेका थिए ।
सामूहिक हत्या भएको एक दिन पछि मृतकको शव उठाइँदै, मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि धरान ल्याइने
धरानबाट एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा कुकुर सहित प्रहरी टोली घटनास्थलमा (तस्बिर सहित)
सङ्खुवासभाको मादी हत्याकाण्डका मृतक सबैको 'ब्लन्ट फोर्स इन्जुरी'
मादी सामूहिक हत्याकाण्ड : पाँच दिनसम्म प्रहरीसँगै थिए हत्यारा
मादी सामूहिक हत्या प्रकरणमा संलग्न आशङ्कामा एक जना छिमेकी पक्राउ, आइतबार प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै
प्रहरीद्वारा 'सामूहिक हत्याकाण्ड' का अभियुक्त सार्वजनिक (प्रहरी अनुसन्धान प्रतिबेदन सहित)
'मादी हत्याकाण्ड' : इटहरीको बुढीखोलामा ६ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार
'सामूहिक हत्याकाण्ड'को अनुसन्धान गर्न सिआइबीको टोली सङ्खुवासभामा
मादी सामूहिक हत्या प्रकरण : अनुसन्धान सुधारोन्मुख भएको प्रहरीको दाबी
मादी सामूहिक हत्याकाण्डमा संलग्नलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै